Express resipe 2 - Ebook mahandro sakafo mahasalama miaraka amin'ny Thermomix latsaky ny 30 '
Resipeo mazava 2 - mahandro mahasalama ao anatin'ny 30 minitra
Farany ny tapany faharoa amin'ny boky mahandro ho an'ny Thermomix, fitambarana fomba fahandro vaovao natao ho an'ireo olona rehetra manam-potoana kely handrahoana sakafo ary tsy te hiala amin'ny fitondrana sakafo feno, salama ary voalanjalanja.
Resipeo vaovao 40 hanomanana ao anatin'ny 30 minitra ary tsy mbola navoaka tao amin'ny bilaogy
Ankehitriny mihoatra ny hatramin'izay dia mila mandany fotoana be any an-trano isika, ary matetika adidy tsy avelany hanana fotoana ilaina isika manomboka mahandro. Ity fanangonana ny fomba fahandro ity dia misy lovia lehibe matsiro, lafiny mahagaga ary tsindrin-tsakafo mahafinaritra vonona ao anatin'ny 30 minitra ary mety ho an'ny fianakaviana manontolo. Te hanana ohatra ve ianao? Sintomy maimaim-poana ny fomba fahandro an'ilay vaovao eBook.
Quinoa, lovia salmon sy voanio nifoka
Krema maivana amin'ny asparagus fotsy
Salady vary miaraka amin'ny legioma sy hazan-dranomasina
Vary mamy misy sifotra
Spaghetti misy saosy fromazy, epinara ary voaloboka
Sakafo hena, trondro ary hazan-dranomasina:
Akoho misy legioma, paoma ary prun
Sambo-by Gin miaraka amin'ny cous cous
Lovia mamy toy ny:
Cookies Raspberry Chocolate haingana
Solomaso fanosotra voasarimakirana misy ranom-boanjo
Ary toy izany hatrany amin'ny resipeo matsiro 40!